Qarax khasaarooyin geystay oo ka dhacay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Qarax khasaarooyin geystay oo ka dhacay Muqdisho
Nawaaxiga Warshaddii hore ee Xeyle Bariise ayuu ka dhacay Qaraxa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa Maanta ka dhacay degmada Huriwaa ee gobolka Banaadir qarax miino oo lala eegtay Ciidanka Taraafida ee ka shaqeeya hagista baabuurta wadooyinka Caasimadda.
Qaraxa wuxuu ka dhacay nawaaxiga Warshadda Xeyle Bariise, waxaana lala eegtay gaari ay saarnaayeen askar katirsan Taraafikadda Soomaaliya. Inta la ogahay dawaralka Gaariga ayaa ku dhintay, 3 kalena way ku dhaawacmeen.
Ma jirto cid sheegatay qaraxa, balse booliska waxay tuhmayaan Kooxda Al-Shabaab, oo falalka argagaxiso ka fulisa dalka iyadoo doonaysa inay xukunka ka tuurto dowladda Caalamka uu aqoonsan yahay ee fadhisa Muqdisho.